“Walking A Fine Line” Documentary Film : Kyaw Thu
1732 September 30, 2015
USA , Washington DC မှာပြသတဲ့ “Walking A Fine Line” Documentary Film နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ အကြောင်း “ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း” “အိမ်ထောင်ရေး” “အခက်အခဲများစွာကြားထဲကမှ အသင်းဖြစ်တည်လာပုံ” “မှန်ကန်တဲ့လမ်ကိုလျှောက်လှမ်းလာပုံ” စတာတွေကို စုံလင်စွာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ Documentary Film ရုပ်ရှင်ပြပွဲပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။
1142 November 24, 2015
အနုပညာရှင်များနှင့်ဆုံရာဝယ် အစီအစဉ်မှာ ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့……. ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ဇာတ်ညွှန်းအတိုင်းဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်တာလေးဝင်ပြရင်းကနေ သရုပ်ဆောင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်……အရင်တုန်းက ခက်ခဲတဲ့ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံ…သရုပ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေတိုင်းမှာ ရုံပြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒ…..ကိုယ်ကျရာဇာတ်ရုပ်အပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ “ဇာတ်ညွှန်းရေးရင်းနဲ့ဗေလုဝဖြစ်လာတယ်” အပိုင်း(၂) နောက်ဆုံးပိုင်းကို DVB Entertainment ကနေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်…….
အနုပညာရှင်များနှင့်ဆုံရာဝယ် (ဇာတ်ညွှန်းရေးရင်းနဲ့ ဗေလုဝဖြစ်လာတယ်) အပိုင်း(၁)
1085 November 18, 2015
အနုပညာရှင်များနှင့်ဆုံရာဝယ်အစီအစဉ်မှာ ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့….. အိမ်ထောင်သက် ၁၂နှစ်မှာ မိသားစုအပေါ်မှာ စိတ်ဆင်းရဲအောင်မထားဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူ…. အိမ်ထောင်မကျခင် ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးယဉ် က သား၂ယောက် နာမည်အကြောင်း… ငယ်ငယ်ကတည်းက စာပေကိုလိုက်စားပြီး စာတွေဖတ်ရင်း စာပေကိုချစ်တတ်လာသူ…သံချပ်မင်းသားကြီး တစ်ယောက်အနေနဲ့အခုထိရပ်တည်နေသူ… လုပ်ငန်းခွင်အရ လူထုကို ပျော်ရွှင်အောင်တင်ဆက်နေရပေမဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အခက်အခဲများနဲ့ငိုငိုနေရရတဲ့လူရွှင်တော်ရဲ့ဘ၀….”ဇာတ်ညွှန်းရေးရင်း နဲ့ ဗေလုဝဖြစ်လာတယ်” အပိုင်း(၁)ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့အတွက် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်…….
အနုပညာရှင်များ နှင့်ဆုံရာဝယ် (ဇာတ်ညွှန်းရေးရင်းနဲ့ ဗေလုဝဖြစ်လာတယ်) အပိုင်း(၁) နမူနာ။
977 November 16, 2015
အနုပညာရှင်များနှင့်ဆုံရာဝယ်အစီအစဉ်မှာ ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့….. အိမ်ထောင်သက် ၁၂နှစ်မှာ မိသားစုအပေါ်မှာ စိတ်ဆင်းရဲအောင်မထားဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူ….အိမ်ထောင်မကျခင် ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးယဉ် က သား၂ယောက် နာမည်အကြောင်း…ငယ်ငယ်ကတည်းက စာပေကိုလိုက်စားပြီး စာတွေဖတ်ရင်း စာပေကိုချစ်တတ်လာသူ…သံချပ်မင်းသားကြီး တစ်ယောက်အနေနဲ့အခုထိရပ်တည်နေသူ…လုပ်ငန်းခွင်အရ လူထုကို ပျော်ရွှင်အောင်တင်ဆက်နေရပေမဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အခက်အခဲများနဲ့ငိုငိုနေရတဲ့လူရွှင်တော်ရဲ့ဘ၀….”ဇာတ်ညွှန်းရေးရင်း နဲ့ ဗေလုဝဖြစ်လာတယ်” အပိုင်း(၁)ကို ၁၉.၁၁.၂၀၁၅(ကြာသပတေးနေ့) DVB Entertainment အစီအစဉ်မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်သတင်းကောင်းပါအပ်ပါသည်။
Artist Profile (စောဖိုးခွား) အပိုင်း(၁)
949 October 28, 2015
အနုပညာရှင်များနဲ့ဆုံရာဝယ်အစီအစဉ်မှာ ကြည့်ရှုခံစားရမှာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးသီချင်းတွေဆိုရတာ ကြိုက်တယ်… ဘောလုံးသမားဘ၀ကနေ ဂီတဘက်ကို ကူးပြောင်းလာခဲ့သူ…… Reggae ဂီတအမျိုးအစား တစ်ခုနဲ့ဘဲ သီဆိုတဲ့ အဆိုတော် စောဖိုးခွား အပိုင်း(၁)ကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
အနုပညာရှင်များနဲ့ဆုံရာဝယ် (လွပ်လပ်ခြင်းဂီတ)စောဖိုးခွား အပိုင်း(၂)
913 November 4, 2015
အနုပညာရှင်များနဲ့ဆုံရာဝယ် အစီအစဉ်မှာ ကြည့်ရှုခံစားရမှာကတော့ Music အကြောင်းကိုမသိသူက Socialize လုပ်ခဲ့တာက Reggae Music….. ပထမဆုံး Peace နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းကိုရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း….. လွတ်လပ်မူကို အခြေခံထားတဲ့ Reggaeအကြောင်း…..အပြင်လက်တွေ့ဘ၀အဖြစ်အပျက်တွေကို ရေးပြီး Reggae Music နဲ့သီဆိုတဲ့ တေးသံရှင်”လွတ်လပ်ခြင်းဂီတ” စောဖိုးခွား အပိုင်း(၂)ကို DVB Entertainment မှ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်များနဲ့ဆုံရာဝယ် အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
911 November 23, 2015
အနုပညာရှင်များနှင့်ဆုံရာဝယ် အစီအစဉ်မှာ ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့……. ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ဇာတ်ညွှန်းအတိုင်းဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်တာလေးဝင်ပြရင်းကနေ သရုပ်ဆောင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်……အရင်တုန်းက ခက်ခဲတဲ့ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံ…သရုပ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေတိုင်းမှာ ရုံပြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒ…..ကိုယ်ကျရာဇာတ်ရုပ်အပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ “ဇာတ်ညွှန်းရေးရင်းနဲ့ဗေလုဝဖြစ်လာတယ်” အပိုင်း(၂) နောက်ဆုံးပိုင်းကို (၂၆.၁၁.၂၀၁၅)ကြာသပတေးနေ့မှာ DVB Entertainment ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကြိုတင်သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
902 July 14, 2015
အနုပညာရှင်များနဲ့ဆုံရာဝယ် (လွတ်လပ်ခြင်းဂီတ) စောဖိုးခွား အပိုင်း(၃) နောက်ဆုံးအပိုင်း
879 November 11, 2015
ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ – Reggae Music ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မူ… လွတ်လပ်စွာ ကခုန်နေတာကလဲ Reggae… Reggae Music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Massage….. ဘ၀သရုပ်အမှန် နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းတွေကိုဘဲ ရေးပြီ ဆိုတာများတဲ့ “လွတ်လပ်ခြင်းဂီတ” စောဖိုးခွား အပိုင်း(၃) နောက်ဆုံးပိုင်းကို DVB Entertainment ကနေ အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်များနဲ့ဆုံရာဝယ် အစီအစဉ်မှာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။